11 Jaamacado oo Faransiis ah oo jaban oo loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah 2022
Haddii aad waligaa ku fikirtay inaad dibedda wax ku barato, liis la soo ururiyey oo ah jaamacado jaban oo Faransiis ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ayaa lagaga hadlay boostadan. Tani waxay ku siin doontaa doorasho balaadhan oo ah dugsiyo aad tixgeliso oo ay waliba fududayso gelitaankaaga.
Faransiiska waa wadan caan ka ah Yurub, waxa uu caan ku yahay cunnooyinka cawska ah iyo cunnada haute, khamriga, dhismayaal taariikhi ah iyo taallooyin sida Tower Louvre iyo Eiffel, matxafyada farshaxanka qadiimiga ah, iyo xeebo qurxoon. Quruxda iyo soo jiidashada Faransiiska laguma adkeyn karo ku filan. Waa mid ka mid ah meelaha ay ajaaniibtu u aadaan fasax.
Mar kasta oo aad ka fikirto Faransiiska waxaad isla markiiba ka fikirtaa dhaqankan qaniga ah ee Faransiiska ee khamriga qalaad iyo dharka tayada leh. Laakiin taasi kaliya ma ahan Faransiiska…
Marka laga reebo dalxiisayaasha soo booqda waddanka oo dhan sanadka oo dhan, Faransiisku sidoo kale waa mid ka mid ah xarumaha ugu sarreeya ee ardayda caalamiga ah. Wadanku waxa uu bixiyaa khibrad waxbarasho oo dhaqamo kala duwan ah oo soo jiidata ardayda aduunka oo dhan si ay u helaan waxbarasho heer caalami ah, bartaan luuqada, oo ay u dhexgalaan aragtideeda dhaqan.
Dalka faransiiska ayaa waxaa ku yaala qaar ka mid ah jaamacadaha ugu wanaagsan qaarada yurub iyo guud ahaan caalamka taasi oo sidoo kale qeyb ka ah waxyaabaha soo jiita ardayda si ay u qaataan shahaado ay aqoonsan yihiin ururada aduunka meel kasta oo ay joogaan. Sababta kale ee ay ardaydu halkan u doorteen waa badbaadadeeda. Yurub waxaa loo arkaa inay tahay gobolka ugu nabdoon adduunka Faransiiskana waa mid ka mid ah daraasadda ugu nabdoon ee dibadda ay u aadayaan ardayda caalamiga ah.
Arday caalami ah oo mustaqbalka ah oo u imanaya inuu ku sii wato shahaadada akadeemiyadeed ee Faransiiska, waa inaad si fiican u taqaan Ingiriisi, Faransiis, ama labadaba. Uma baahnid inaad ka walwasho inaad barato luqadda Faransiiska ka hor intaadan soo gelin. Qiyaastii 39% dadku waxay ku hadli karaan Ingiriisiga.
Sidoo kale, si loo soo jiito arday badan oo caalami ah, jaamacadaha ku yaal Faransiiska waxay bixiyaan barnaamijyo kala duwan oo gebi ahaanba lagu baray luqadda Ingiriisiga. Si kastaba ha ahaatee, inaad ku hadasho Faransiiska waxay ka dhigi kartaa joogitaankaaga halkan mid aad u xiiso badan sababtoo ah waxaad si fudud ula qabsan kartaa wadahadalada dadka deegaanka oo aad si fiican u fahmi kartaa dhaqanka.
Faransiiska kuma koobna oo keliya meel la booqdo laakiin waxa ay sidoo kale caddeeyeen inay tahay meel aad u wanaagsan oo wax lagu barto oo u furan codsadayaasha adduunka oo dhan.
Hadda, sababtoo ah dabeecadda qalaad ee Faransiiska, arday badan ayaa aaminsan in kharashka waxbarashada iyo kharashka nolosha ay tahay inay noqdaan dhinaca sare, taas oo ah, qaali ah. In kasta oo aanay tani run ahayn, haddana fikraddu waxay dib u dhigtay arday badan inay wax ka bartaan Faransiiska oo ay wayday fursadaha qaarkood.
Maanta, waxaan daabacnay maqaalkan si aan u nadiifinno jahwareerkaas oo aan kaa caawino inaad fahamto inay jiraan jaamacado jaban oo Faransiis ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Marka laga reebo in aan kaa caawino in aad nadiifiso jaahwareerkan, waxaan sidoo kale soo uruurinay cilmi-baaris waxaanan abuurnay liiska jaamacadahan jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah.
Mid kasta oo ka mid ah dugsiyadan ayaa laga hadlay muujinta barnaamijyada ay bixiyaan, kharashka waxbarashada ee barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kan qalin-jabinta, iyo isku-xiryada kala duwan ee lagu siiyay inaad wax badan ka barato dugsiga xiisahaaga leh oo laga yaabo inaad bilowdo codsigaaga.
1 Shuruudaha Waxbarasho ee Faransiiska sidii Arday Caalami ah
2 Sida loogu Helo Jaamacado Raqiis ah oo ku yaal Faransiiska Ardayda Caalamiga ah
3 Celceliska Kharashka Waxbarasho ee Faransiiska ee Ardayda Caalamiga ah
4 Jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah
4.1 1. Jaamacadda Paris
4.2 2. Jaamacadda Montpelier
4.3 3. Jaamacadda Orléans
4.4 4. Jaamacadda Strasbourg
4.5 5. École Normale Superieure (ENS Paris)
4.6 6. Jaamacadda Aix-Marseille
4.7 7. Jaamacadda Burgundy
4.8 8. École Centrale de Lyon
4.9 9. Jaamacadda Angers
4.10 10. Jaamacadda Jean Monnet
4.11 11. Jaamacadda Nantes
5.1 Jaamacadaha ku yaal Faransiiska bilaash ma u yihiin ardayda caalamiga ah?
5.2 Immisa ayay ku kacaysaa in wax lagu barto Faransiiska ardayda caalamiga ah?
Shuruudaha Waxbarasho ee Faransiiska sidii Arday Caalami ah
Shuruudaha looga baahan yahay in lagu barto Faransiiska sidii arday caalami ah waxay ku kala duwan yihiin barnaamijka shahaadada aad rabto inaad ku sii waddo, jaamacadaha, iyo dalkaaga asalka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ku siin karnaa shuruudaha guud ee codsiga markaa markaad aragto mid ka mid ah dugsiyada aad jeceshahay, waxaad riixi kartaa isku xirka si aad wax badan uga ogaato shuruudaha dheeraadka ah ee la xiriira goobtaada waxbarasho ee gaarka ah.
Shuruudaha caadiga ah waa;
Haysato fiisaha ardayga ama ogolaanshaha waxbarasho, mid ka mid ah kuwan la'aanteed laguma ogolaan doono inaad dalka gasho si aad wax u barato.
Soo gudbi qoraaladaada tacliimeed ee dugsiyadii hore ee aad dhigan jirtay.
Qoraallo iyo waraysiyo ayaa loo baahan karaa iyadoo ku xidhan jaamacadda ama barnaamijka
Qaado imtixaanka aqoonta luqadda Ingiriisiga ama Faransiiska. Haddii aad u socoto barnaamij lagu baray Ingiriisi markaas waxaad u baahan tahay inaad qaadato TOEFL ama IELTS. Oo haddii aad u socoto barnaamij lagu barto Faransiiska, waxaad u baahan tahay inaad qaadato TFI, DILF, DELF, ama DALF.
Dukumeentiyada kale sida waraaqaha tixraaca, bayaanka ujeedada, CV ama resume, kaarka aqoonsiga, iwm. ayaa loo baahan karaa.
Sida loogu Helo Jaamacado Raqiis ah oo ku yaal Faransiiska Ardayda Caalamiga ah
Intarneetku waa xog ururin loogu talagalay dhammaan noocyada agabka oo ay ku jiraan helidda jaamacado jaban oo Faransiis ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah, markaa ka faa'iidayso. Haddii aad ku jirto kulliyad ama dugsi sare, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad kala hadasho macalimiinkaaga, macalimiinkaaga, ama macalimiintaada sidii aad u heli lahayd jaamacad jaban gudaha Faransiiska ardayda caalamiga ah iyo xiisaha aad u leedahay inaad dalbato mid ka mid ah.
Hoos waxaa ku qoran, waxaan siinay tafaasiil dhammaystiran mid kasta oo ka mid ah 11ka jaamacadood ee jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah. Markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad joojiso walbahaarka oo aad akhrido kan aan hubno inay caawinaad weyn ku jirto.
Celceliska Kharashka Waxbarasho ee Faransiiska ee Ardayda Caalamiga ah
Khidmadaha waxbaridda ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ahi way ku kala duwan yihiin barnaamijyada shahaadada iyo jaamacadaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaanu siinay celcelis ahaan kala duwanaansho waxbarasho oo heer jaamacadeed ah, masters, iyo Ph.D. barnaamijyada.
Celceliska kharashka waxbarashada ee ardayda caalamiga ah ee Faransiiska waa € 2,770 sanadkii barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda, € 3,770 sanadkii barnaamijyada masters-ka, iyo € 380 sanadkiiba Ph.D. barnaamijyada.
Qaar ka mid ah jaamacadaha Faransiiska ayaa u jaban ardayda caalamiga ah waxaana jira deeqo waxbarasho oo aad nasiib wanaag ku heli karto gacmahaaga si aad u sii yarayso qiimaha waxbarashadaada Faransiiska. Iyada oo aan wax kale laga baran, aan galno 11-ka jaamacadood ee jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah.
Jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah
Waa kuwan jaamacadaha waxbaridda hooseeya ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah:
Jaamacadda Jean Monnet
1. Jaamacadda Paris
Jaamacadda Paris waxay ku jirtaa liiskayaga ugu horreeya ee jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah. Waxay ku taal magaalada Paris ee dalka Faransiiska, waxaana la aasaasay 1150, waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn Faransiiska, Yurub, iyo adduunka. Jaamacaddu waxay xoojisaa waxbarashada caalamiga ah waxayna albaabada u furaysaa ardayda adduunka oo dhan ee doonaya inay halkan wax ku bartaan.
Jaamacaddu waxay si wanaagsan ugu diyaargarowday inay aqbasho ardayda caalamiga ah markay yimaadaan ardayda waxay siisaa dhammaan agabka, adeegyada, iyo talooyinka wax ku oolka ah ee ay uga baahan yihiin inay ku raaxaystaan ​​joogitaankooda Paris. Inta lagu jiro waxbarashadaada halkan, waxaad heli doontaa daryeel caafimaad iyo kaalmo lacageed oo bilaash ah, iyo deeqo waxbarasho si ay u caawiyaan kharashka waxbarashadaada.
Waxaa jira in ka badan 63,000 oo arday oo dhigta Jaamacadda Paris oo ka soo jeeda asal dhaqameedyo kala duwan oo raacaya barnaamijyada bachelor, master, iyo heerarka daraasadda. Lacagta wax lagu dhigto ee shahaadada jaamacadeed ee ardayda caalamiga ah waxay ka bilaabataa €170 sanadkii, kharashka waxbarashada ee barnaamijyada masters-ka waxay ka bilaabataa € 243 sanadkii, iyo € 380 sanadkiiba Ph.D. barnaamijka.
Booqo websaydhka Iskuulka
2. Jaamacadda Montpelier
Jaamacadda Montpelier waa jaamacad cilmi-baaris degdeg ah oo caalami ah laga aqoonsan yahay oo ku taal Montpelier, koonfur-bari ee Faransiiska. Waa mid ka mid ah jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee la aasaasay 1220 waxaana loo aqoonsaday mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn adduunka. Halkan, waxaad xor u tahay inaad ku sii wadato barnaamijyada u horseedaya bachelor, master's, ama shahaadooyinka doctorate-ka.
Waxaa jira in ka badan 49,000 oo arday oo halkan ku qoran 250 barnaamijyadeeda masters-ka, 150 barnaamij oo bachelor ah, iyo 55 diblooma qaran. Tirada guud ee ardayda halkan, in ka badan 7,000 ayaa ka kala yimid meelo kala duwan oo adduunka ah. Barnaamijyada ugu caansan Jaamacadda de Montpelier waa injineernimada, ganacsiga, sharciga, bayoolajiga, iyo kimistariga, dhaqaalaha, iwm.
Kharashka waxbarashada ee ardayda caalamiga ah waa € 130 sanadkii barnaamijyada bachelor iyo € 245 sanadkii barnaamijyada masters-ka.
3. Jaamacadda Orléans
Jaamacadda Orleans - Ingiriisi - waa mid ka mid ah jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah. Waxaa la aasaasay sanadkii 1306 magaalada Orleans ee dalka Faransiiska, waxaana tan iyo markaas ay ku jirtay khariidadda bixinta waxbarasho heer caalami ah oo ku saabsan qaybaha kala duwan ee waxbarasho oo ay ku jiraan cilmiga caafimaadka, farshaxanka, injineernimada, ganacsiga, sharciga, iwm taasoo horseedaysa masters iyo shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Ardayda caalamiga ah ee ku jira barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo mastarka waxay bixiyaan kharashka waxbarashada sanadlaha ah $ 1000. Kharashaadka nolosha ayaa sidoo kale lagu qiyaasay inta u dhaxaysa $692 - $1,272 bishii.
4. Jaamacadda Strasbourg
Tani waa jaamacad kale oo raqiis ah oo laga yaabo inaad rabto inaad tixgeliso inaad codsato, waa raqiis, waxaana loo aqoonsan yahay mid ka mid ah kuwa adduunka ugu wanaagsan, waxayna bixisa waxbarasho heer caalami ah oo barnaamijyo tacliineed oo kala duwan ah. Unistra, sida inta badan loo tixraaco, waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo ku taal Alsace, Faransiiska halkaas oo dadka maxalliga ah halkan lagu sheegay inay saaxiibtinimo iyo deeqsinimo u leeyihiin ajaanibta.
Sida kuwa kale ee ilaa hadda ku jira liiskan, waa machad hore oo waxbarasho sare ah oo la asaasay 1538 laakiin waxa ay sii waddaa dib u cusboonaysiinta iyo isbeddelka habkeeda waxbarasho si ay ugu habboonaato heerka waxbarasho ee hadda jira. Waaxyaha jaamacaddu waa waaxda Fanka & Luuqadda, Sharciga & Dhaqaalaha, Sayniska Bulshada & Aadanaha, Sayniska & Tignoolajiyada, iyo Caafimaadka.
Unistra waa bulsho kala duwan oo leh 20% 48,000 oo arday oo ka kala yimid dalal kale iyo asalyo kala duwan. Kharashka waxbarashada ee barnaamijyada shahaadada koowaad wuxuu ka bilaabmaa € 2,871 sanadkii iyo € 3,907 sanadkii barnaamijyada qalin-jabinta.
5. École Normale Superieure (ENS Paris)
ENS Paris waa mid ka mid ah jaamacadaha la awoodi karo ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee ku taal Quarter-ka Latin ee cilmiga leh iyo dhagax tuur ka yimid Kaniisadda caanka ah ee Notre Dame. Waa hay’ad cilmi-baadhiseed oo dhinacyo badan taabanaysa oo ka kooban 15 waaxood, 35 shaybaadh, iyo 9 maktabadood oo dhammaantood loogu talo galay inay ardaydu adeegsadaan oo lagu barayo xirfado iyo aqoon waxtar u yeelan kara dugsiga ka dib.
Farshaxanka, Sayniska Kombiyuutarka, Geosciences, Suugaanta iyo Luuqadda, Xisaabta, Bayolojiga, Dhaqaalaha waa qayb ka mid ah waaxyaha iyo barnaamijyada ENS Paris. Dugsigu waxa uu leeyahay xafiis loo qoondeeyay in uu daboolo baahiyaha ardayda caalamiga ah laga bilaabo marka ay danaynayaan in ay halkan ka codsadaan. Dhammaan agabyada ay u baahan yihiin ee ka caawin doona codsi guul leh ayaa la siin doonaa.
Kharashka waxbarashada ee ENS wuxuu ka bilaabmaa $1,730 sanadkii.
6. Jaamacadda Aix-Marseille
Jaamacadahan jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah runtii waa da 'weyn oo lagu dhisay boqolaal sano oo cilmi baaris ah waana tan ka dhigaysa inay bixiyaan barnaamijyo waxbarasho oo tayo leh. AMU sidoo kale waa mid duug ah oo la aasaasay 1409 oo ah jaamacad dadweyne sidaa darteed waxbarashadeedu waa yar tahay, waxay bixisaa barnaamijyo shahaado waxbarasho oo ballaaran waxayna aqbashaa ardayda adduunka oo dhan.
Waxaa jira in ka badan 68,000 oo arday oo ku sugan AMU iyadoo 13% dadkan ka yimid wadamo kale ay wataan shahaadooyin dhanka sharciga, fanka & suugaanta, dhaqaalaha & maamulka, cilmiga siyaasada, iyo qaar kaloo badan. Lacagta bilawga ah ee ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda waa € 170 sanadkii iyo € 243 sanadkii barnaamijyada masters-ka.
7. Jaamacadda Burgundy
Tani waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee la aasaasay 1722 waxayna ku taal gobolka bari ee Dijon, Faransiiska. Jaamacaddu waa taageere weyn oo waxbarashada caalamiga ah, sidaas darteed, waxay ogolaataa arday badan oo ajnabi ah intii ay awoodaan. Waxaa jira in ka badan 30,000 oo arday kuwaas oo 10% ay yihiin arday caalami ah oo ka kala yimid 100 waddan oo kala duwan.
Jaamacadda Burgundy waxaa ku yaal 10 kulliyadood, 3 machadyo tignoolajiyada, 4 dugsiyo injineernimo, iyo machadyo waxbarasho. Machadku waa mid diiradda saaraya cilmi-baarista oo leh barnaamijyo caan ah oo udub dhexaad u ah ganacsiga iyo maamulka, injineernimada iyo cilmiga farsamada, cilmiga caafimaadka, cilmiga dhulka, iyo qaar kaloo badan.
Kharashka waxbaridda ee ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada bachelor-ka waa $ 1,000 sanadkii iyo barnaamijyada mastarka, sidoo kale waa $ 1,000 sanadkii labadaba sida khidmadaha bilowga ah.
8. École Centrale de Lyon
École Centrale de Lyon waa jaamacad cilmi baaris ku leh Lyon oo la aasaasay 1857 sidoo kale waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu da'da weyn agagaarka. Jaamacaddu waxay xiriir xooggan la leedahay machadyada kale ee heerka caalami ee adduunka oo dhan waana u doodaha daraasadaha caalamiga ah. Ilaa 40% wadarta guud ee ardaydeeda waxay ka yimaadeen wadamo shisheeye oo daba socda barnaamijyo kala duwan oo ah bachelor, master, iyo doctorate.
Qaybaha wax-soo-saarka sida bayotechnoolajiyada, nanotechnology, biosciences, iyo acoustic technology waa qaar ka mid ah barnaamijyadii ugu dambeeyay ee ardaydu ku lug yeelan karaan. Kharashka waxbarashadu wuxuu ka bilaabmaa € 2,500 sanadkii.
9. Jaamacadda Angers
Hoy u ah ilaa 22,000 oo arday oo la aasaasay 1337, Jaamacadda Angers waa mid ka mid ah jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah. Waa jaamacad dadweyne oo ku taal Angers, France, waxayna aqbashaa ardayda caalamiga ah mid ka mid ah barnaamijyada ay xaq u leeyihiin inay codsadaan.
Jaamacaddu waxay bixisaa barnaamijyo tacliin oo kala duwan iyada oo loo marayo kulliyadaheeda sharciga, daraasadaha ganacsiga, sayniska, iyo tignoolajiyada. Shuruudaha lagu galo gelitaanka dugsigan way kala duwan yihiin, marka, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad raacdo xidhiidhka hoose si aad wax badan uga barato barnaamijyada gaarka ah.
Kharashka waxbaridda ee barnaamijyada shahaadada koowaad iyo kan qalin-jabinta waxay ka bilaabataa € 852 sanadkii.
10. Jaamacadda Jean Monnet
Tani waa mid ka mid ah jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah. Waxaa la aasaasay 1969-kii sidii jaamacad cilmi-baaris oo degdeg ah oo ku taal Saint-Etienne, France. Ilaa hadda liiskan jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, jaamacaddan Jean Monnet waxay u muuqataa inay tahay tan ugu da'da yar laakiin taasi sinaba uma carqaladayso tayada tacliimeed.
Jaamacaddu waxay bixisa shahaado tacliimeed oo kala duwan iyada oo u maraysa kuliyadeeda sharafta leh ee fanka, luqadaha, sharciga, koorsooyinka xarfaha, caafimaadka, injineernimada, dhaqaalaha, cilmiga aadanaha, iyo maamulka. Barnaamijyadani waxay u horseedaan shahaadada koowaad ee jaamacadda, mastarka, iyo shahaadooyinka doctorate-ka. Kharashka waxbarashada ee barnaamijyada shahaadada koowaad wuxuu ka bilaabmaa € 500 sanadkii iyo € 1,028 sanadkii barnaamijyada qalin-jabinta.
11. Jaamacadda Nantes
Ugu dambeyntiina ugu yaraan liiskayaga jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee ardayda caalamiga ah waa Jaamacadda Nantes. Waxaa la aasaasay 1460 waana mid ka mid ah machadyada ka shaqeeya Yurub ugu da'da weyn. Barnaamijyadeeda tacliimeed waa heer caalami iyo caalami ahaan la aqoonsan yahay. Jaamacadan waxaa iska diiwaan galiyay in ka badan 35,000 oo arday oo ka kala yimid dhaqamo kala duwan.
Kulliyadaha dugsiga waa Daawada, Cilmi-nafsiga, Sharciga, Sayniska Siyaasadda, Sayniska iyo Tignoolajiyada, Ilkaha, iyo kuwa kale. Barnaamijyadani waxay u horseedaan bachelor's, master's, iyo Ph.D. shahaadooyinka. Khidmada waxbaridda ee ardayda caalamiga ah ee barnaamijyada shahaadada koowaad waxay ka bilaabataa € 184 sanadkii iyo € 212 sanadkii barnaamijyada masters-ka.
Tani waxay soo afjaraysaa jaamacadaha jaban ee Faransiiska ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, u mara mid kasta si taxadar leh oo raac xiriirinta si aad u aragto faahfaahin ku saabsan sida loo codsado iyo waqtiyada kama dambaysta ah.
Jaamacadaha ku yaal Faransiiska bilaash ma u yihiin ardayda caalamiga ah?
Jaamacadaha Faransiiska bilaash uma aha ardayda caalamiga ah laakiin waxaa jira qaar hodan ah sida kuwa ku taxan maqaalkan.
Immisa ayay ku kacaysaa in wax lagu barto Faransiiska ardayda caalamiga ah?
Qiimaha ardayda caalamiga ah ee wax ku barata Faransiiska waxay u dhaxaysaa € 380 ilaa € 2,770 sanadkiiba iyadoo kuxiran shahaadada aad rabto inaad sii wadato.
15 Koorsooyinka Tooska ah ee Faransiiska oo leh Xiriirintooda Codsiga
Koorsooyinka Dibloomada Dibloomada ah ee Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
20 Kulliyadaha Bulshada ee ugu Jaban USA ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
6 Dugsiyada Caafimaadka ee Jaban ee Australia ee Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadaha Waxbarashada Yar Barashada Hagaha Dibadda
Previous Post:Barashada sida wax loo barto: Sida loogu guuleysto kulliyadda
Post Next:13ka Jaamacadood ee ugu Fiican Sharciga Caalamiga ah